Global Voices teny Malagasy · 28 Oktobra 2018
Tantara tamin'ny 28 Oktobra 2018
Eoropa Afovoany & Atsinanana28 Oktobra 2018
Hifidy - sa tsy hifidy? ''Hifidy amin'ny tongotrao'' - sa hanaraka ny torohevitr'i Mikhail Khodorkovsky ary hifidy ny iray amin'ireo antoko kely indrindra tsy ''ambanianao''? Hanao ankivy ny fifidianana - sa hanimba ny vatom-pifidianana? Ho hahitsy tsara sy hanamarina ny iray amin'ireo efajoro kely fandatsahambato - sa ho lasa maditra...
Taorian'ny volana maro niandrasana sy ireo sahoan-dresaka, azo ihany ny rariny tao anatina tantara Ejiptiana izay nisy mpamily iray voalely am-body sy nampijalian'ny polisy - izay naka an-dahatsary ny heloka bevavan'izy ireo mba hanalàna baraka kokoa ny olona nampijaliany. (Fanamarihana avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra: miala tsiny amin'izay tohina amin'ilay teny...